” मध्यरातको भाईबर म्यासेज ” कथा  Hamrosandesh.com
” मध्यरातको भाईबर म्यासेज ” कथा
“मदहोशमा रमाउदै छु ” उसको रिप्लाई पढ्दै थिए अर्को म्यासेज पनि टुप्लुक्क आई पुग्यो “। “कहिले कहिँ आफ्नो भावना कुण्ठित गरेर बस्नुको व्यथा सायद यहि व्हिस्कीले मात्र बुझ्न सक्दो रैछ ” अप्रत्याशित कुरा उसले ब्यक्त गरि।
“उत्सब ! तिमीलाई थाहा छ , यहाँ मैले व्हिसिकी पानी बिना पिउन सक्दिन र यी रातहरु पनि अध्यारो बिना चम्किन सक्दैन।यहाँ कैयौ रातहरुले अध्यारोमा चम्किदै दुई बजाउने गर्छन । यो पहिलो रात होइन “व्हिस्कीको फोटोसंगै घुमाउरो कुनै फ्लिमको लागि लेखिएको संबाद जस्तो लाग्ने म्यासेज पठाई। यता मलाई निद्राले च्यापेको थियो उसलाई भने नशा र भावना उत्तिकै चढ्दै थियो । फेरी उतै बाट म्य्सेज आयो ” तिमीलाई थाहा छ , म तिमीलाई प्रेम गर्छु ” ।
कुरा लम्बिए उता क्रान्तिले अनलाईन देखि भने शंका गर्ने हो कि ? डरको त्यान्द्रोले बेर्दै थियो उपाय फुरी हाल्यो । भाईबरको प्राइभेसीमा गएर सेयर अनलाईन स्ट्याटस अफ गरेर ढुक्क भए । मैले आफुले अहिले सम्म त्यस्तो अनुभब नगरेको मार्टिनालाई बताए तर उसले प्रश्नहरु थप्दै गई ।
निद्रा देवीलाई उसलाई निद्रालोकमा धकलेकोमा धन्यबाद दिए , रिप्लाई दिएमा कुरा बढ्न सक्थियो त्यसैले केहि लेखिन । मोबाईल भाइब्रेट गर्न छोड्यो , आनन्दको लामो सुस्केरो ताने । सुत्नु अगाडी मनमनै सोचे “के एकै चोटी दुई व्यक्तिसंग प्रेम हुन सक्छ त ? किन सबै गर्दै छे ? रक्सिको नशामा त फेरी मनको कुरा बोल्छन रे ! आफै दिमाग घुमाउदै थिए ” के मार्टिनाले मलाई प्रेम गर्छे त ? कि व्हिस्कीको चुस्की प्रेम मात्र हो ।